पशुपालन कार्यविधि अन्तिम चरणमा | गृहपृष्ठ
Home समाचार पशुपालन कार्यविधि अन्तिम चरणमा
पशुपालन कार्यविधि अन्तिम चरणमा
पुस ६, काठमाडौँ (अस)। सरकारले ल्याउन लागेको पशुपालनसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘कार्यविधि तयारीको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ, केही दिनभित्रमै यो पारित हुनेछ,’ गुरुङले भने । कार्यविधि पारित भएपछि सरकारले पशुपालनमा दिने भनेको ऋण सहयोग कार्यान्वयन हुन बाटो खुल्नेछ । सरकारले मासुको बढ्दो आयातलाई रोक्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पशुपालनका लागि किसानहरूलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउन रू. १ अर्ब छुट्टयाएको थियो । कार्यविधि पुस महीनाभित्रमा पास हुने र किसानहरूले माघदेखि पशुपालनका लागि ऋण सहयोग पाउने गुरुङले बताए । ‘किसानहरूसम्म ऋण पुर्‍याउन सरकारले पहिला साना किसान विकास बैङ्कलाई ऋण दिनेछ,’ उनले भने । साना किसान विकास बैङ्कले सहकारीलाई ऋण दिने र सहकारीमार्फta किसानहरूले ऋण पाउने गुरुङले जानकारी दिए ।
गत आवमा मासुका लागि मात्र रू. १५ अर्ब बराबरका पशु आयात भएको सरकारी अनुमान रहेको छ । मासुको बढ्दो आयातले भुक्तानी सन्तुलनमा असर पारेको भन्दै सरकारले चालू आवबाट मासुको आयात घटाउँदै लैजाने रणनीति लिएको छ । यसका लागि सरकारले चालू आवमा पशुपालनमा प्रोत्साहन दिन सहुलियत दरमा किसानहरूलाई ऋण सहयोग दिने योजना बनाएको हो । कुल खपतमध्ये कुखुराको मासुमा मात्र नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ । सरकारले दिने सहयोग रकम राँगा, बङ्गुर र बाख्रा पालनका लागि उपयोग हुने गुरुङले बताए । ‘सहुलियत दरमा दिइने ऋण पशुपालन बढी हुने जिल्लामा जानेछ,’ उनले भने ।
सङ्घले दुग्ध विकास संस्थानबाट रू. ३५ लाख पाएन
पुस ६, काठमाडौं (अस)। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले दुग्ध विकास संस्थानबाट सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने करीब रू. ३४ लाख ८० हजार नपाएको बताएको छ । विसं २०६५ साउन २८ मा सङ्घ र संस्थानबीच संस्थानमा जम्मा भएको दूधको प्रतिलिटर पाँच पैसाका दरले सङ्घलाई दिने सम्झौता भएको थियो । सङ्घका अध्यक्ष माधव कोइरालाले संस्थानलाई पटकपटक लिखित र मौखिक आग्रह गर्दा पनि रकम नपाइएको अभियानलाई बताए । ‘संस्थानमा दैनिक ७० देखि ९० हजार लिटर दूध जम्मा हुँदै आए पनि औसतमा ८० हजार लिटर दूधको प्रतिलिटर पाँच पैसाका दरले दिने सम्झौता भएको हो,’ कोइरालाले भने । सम्झौताअनुसार दैनिक रू.४ हजार सङ्घले पाउनुपर्ने देखिन्छ । सङ्घले पाउनुपर्ने रकम सम्झौता भएको मितिदेखि २०६७ पुससम्मको हो ।
संस्थानबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएपछि सङ्घ कानूनी प्रक्रियामा जान लागेको थियो । तर, संस्थानमा नयाँ महाप्रबन्धकको नियुक्ति भएकाले तुरुन्तै कानूनी प्रक्रियामा नगएको अध्यक्ष कोइरालाले बताए । ‘संस्थानका महाप्रबन्धकसँग भएको अनौपचारिक छलफल सकारात्मक छ,’ उनले भने । संस्थानका महाप्रबन्धक कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि सङ्घका अध्यक्षसँग अनौपचारिक कुरा भएको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘मैले भर्खर काम सम्हालेकाले अहिले अध्ययन गर्दैछु, वास्तविकता बुझेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने छु ।’ जसरी भए पनि सहमतिमै कुरा टुङ्ग्याउने उनको भनाइ थियो । संस्थान र सङ्घबीच भएको सम्झौतामा दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घसंस्थाहरूलाई दूध चिस्याउने उपकरण खरीद गर्न निर्ब्याजी ऋण प्रदान गर्ने, दूध परीक्षण व्यवस्थामा अटोमेशन लागू गर्ने, दूधको गुणस्तर सुधार गर्न तालीम र अध्ययन भ्रमणमा सहकार्य गर्नेलगायतका विषय भए पनि यीमध्ये अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताइएको छ ।
महेन्द्रनगरबाट उखु भारत लान रोक
पुस ६, महेन्द्रनगर (अस) । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी, परासन, रामपुरविलासीपुर र शङ्करपुरलगायत ग्रामीण भेगमा उत्पादित उखुको मूल्य नतोकिँदा उखु किसानहरू मर्कामा परेका छन् । राम्रो आम्दानीको आशमा धान खेती मासेर उखु खेती गरेका यस क्षेत्रका हजारौँ किसान परिवारहरू यतिबेला उचित मूल्य नपाएपछि निराश बनेका हुन् । उत्पादित उखु भारतका चिनी मिलसम्म लगेर बेच्न नपाएकोमा उनीहरू थप चिन्तित बनेका हुन् । भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले उनीहरूलाई भारतमा उखु बेच्न सीमाक्षेत्रमै रोक्ने गरेपछि किसानहरू मर्कामा परेका हुन् । सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा दर्जनौँ चिनी मिल भए पनि एसएसबीले नेपाली उखु सीमापारि लगेर बेच्न दिइरहेको छैन । यसले गर्दा उनीहरू स्थानीय गाउँघरमै रू. १ सय ६० प्रतिक्विण्टलमै उखु बेच्न बाध्य भएको कृषक रामलाल रानाले बताए । भारतीय बजारमा उखुको मूल्य प्रतिक्विण्टल रू. ४ सय ८० सम्म रहेको उनले बताए ।
गत वर्ष शङ्करपुर, परासन, रामपुरविलासीपुर र त्रिभुवनवस्तीलगायत गाविसहरूमा २ सय बढी कोल सञ्चालनमा थिए । तर, ठूलो चिनी मिल खुल्न लागे पछि झण्डै ८० प्रतिशत कोल बन्द भएका छन् । बाँकी कोलले उखुको मूल्य घटाएपछि सस्तैमा बेच्नु परिरहेको परासन-२ का गोविन्द अधिकारीले बताए । कोलको तुलनामा उखु धेरै भएका कारण उखुको मूल्य धेरै तल झरेको उनीहरूको ठम्याइ छ । रामपुरविलासीपुर-३ मा निर्माणाधीन चिनी मिल सञ्चालन हुने पक्का भएपछि यस क्षेत्रका २० हजार बढी किसानले यस वर्ष उखु खेती गरेका थिए । तर, सो मिल तयार हुन अझै दुइ महीना लाग्ने भएपछि तयार भएको उखु खेर जाने अवस्थामा पुगेको बेलौरीका स्थानीय कृषक भगीराम चौधरीले बताए । यस वर्षचार बिगाहा धान खेतमा गरेको उखु खेती त्यसै खेर गइरहेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘अब मैले बैङ्कको ऋण पो कसरी तिर्ने ?’ महेन्द्रनगर जिल्लाका झण्डै २५ हजार हेक्टर जमीनमा उखु खेती गरेका ८० हजार जनता यसबाट प्रत्यक्ष पीडित बनेका उखु उत्पादक सङ्घ कञ्चनपुरले बताएको छ । सङ्घले उचित र सहुलियतपूर्ण बजारीकरणका लागि स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेको छ ।
नेपाली केराको बजार बढयो
नेपाल केरा उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै छ । ६/७ वर्षअघि काठमाडौंमा अधिकांश भारतीय केरा मात्रै विक्री हुने गरेकोमा अहिले नेपाली केराले त्यो ठाउँ ढाकेको छ । नेपाल फलफूल व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष नारायण धितालका अनुसार ०६०/६१ सम्म काठमाडौंको बल्खु बजारमा ल्याइने केरामध्ये ७० प्रतिशत भारतीय हुने गरेकोमा अहिले नेपाली केराले ८५ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ । चैत-बैशाखदेखि मङ्सिर-पुससम्म नेपाली केरा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने र केराको खास मौसमसमेत भएकाले त्यतिबेला नेपाली केराले आधिपत्य जमाउने गरेको छ । माघदेखि चैत मध्यसम्म भने नेपाली केरा त्यति नहुने कारणले भारतबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ । कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट प्रकाशित हुने तथ्याङ्कले पनि यसलाई पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०५५/५६ र २०६५/६६ बीचको १० वर्षमा ७० प्रतिशतले क्षेत्रफल बढेको र उत्पादन ८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । झण्डै दोब्बर हुन पुगेको उत्पादनले केराको आयातमा निकै कमी ल्याएको हो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पहिलो ५ वर्षको अवधिमा केराको क्षेत्रफल र उत्पादन त्यति बढेको छैन । २०५५/६६ को आधारमा क्षेत्रफलमा ५ वर्षमा जम्मा ६ प्रतिशत र उत्पादन ७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । सो अवधिमा एक हेक्टरमा सरदर १४ मेट्रिक टन केरा उत्पादन भएको देखिन्छ । २०६०/६१ देखि २०६५/६६ को अवधिमा भने केराखेतीको क्षेत्रफल र उत्पादन दुवै बढेको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मात्र हिसाब हेर्दा ६० प्रतिशत क्षेत्रफल बढेको छ । त्यसैगरी सो अवधिमा उत्पादन ७५ प्रतिशतले बढेको छ । क्षेत्रफल वृद्धिका साथै एक हेक्टरमा १४ मेटि्रक टन उत्पादन अर्थात् डेढ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर उत्पादन बढ्नुले कुल उत्पादन बढेको हो । तथ्याङ्कले नेपाली किसान पनि केराखेतीतर्फ आकर्षित हुँदै गएको देखिन्छ ।